Chii chauri kutsvaga?
Tsvaga muedzo weDNA. Nyora semuenzaniso DNA pabonde
Tsvaga ruzivo. Nyora semuenzaniso buccal swab
Tevedzera kana kuwana mhedzisiro. Type semuenzaniso 250256
Ona bvunzo dzese dzeDNA DNA bvunzo dzeshiri
Nzira yekuodha sei?
musha > DNA miedzo > Other > Microchip scanner
89,90€ Wedzera ngoro
Microchip scanner uwandu
Microchip scanner Uwandu hwese: ★★★★★ 4.9 maererano ne 150 wongororo.
Raira iyo DNA bvunzo: Microchip scanner
3,00€ Wedzera ngoro
Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa, ZVIMWE Biotechnologies© 2022
Ndokumbira umirire ...
Yakabudirira kuwedzerwa mungoro
Simbisa odha yangu